Ngwa ụlọ oche ihe ndozi ụgbọ ala, ndị na -ebubata ya - ndị na -emepụta ngwa ọrụ ụgbọ ala China
Ezi aha onye ọrụ maka onye nrụpụta China PU/PVC akpụkpọ anụ maka mkpuchi oche ụgbọ ala
Ezi mma na ọnụ ala mkpuchi mkpuchi oche ụgbọ ala
Mgbe kọfị na -ada na mkpuchi oche akpụkpọ anụ ụgbọ ala, jiri nhicha akwụkwọ hichaa ya iji mee ka mkpuchi oche akpụkpọ anụ dị ọcha.
Mfe nrụnye mkpuchi mkpuchi oche akpaaka zuru ụwa ọnụ
Ihe mkpuchi oche ụgbọ ala dị ka aha kọwara bụ mkpuchi oche ụgbọ ala, mkpuchi oche akpụkpọ anụ nwere ike chekwaa oche oche ụgbọ ala mbụ ka ọ kpọọ nkụ ma dị ọcha, iji gbochie ọrụ akpụkpọ anụ merela agadi.
Akwa mma Kacha mma oche mkpuchi mmiri maka ụgbọ ala
Ihe mkpuchi oche ụgbọ ala nwere ike ichebe oche ụgbọ ala ka ọ ghara imebi ya. Bensen nwere ọtụtụ oche mkpuchi ụgbọ ala maka ị nwere ike ịhọrọ, yabụ kpọtụrụ anyị ugbu a!
Agba dị iche iche akpụkpọ anụ akpaaka akpaaka oche mkpuchi mkpuchi
Bensen na -eji akpụkpọ anụ eme ihe na gburugburu ebe obibi iji mee akwa akpụkpọ anụ ụgbọ ala, nke na -agaghị ewepụta isi na -akpasu iwe ma chebe ahụike gị.